kuhlanganiswe uhlobo isihlungi - China Tianjin Chunyuan Longrun
elihlangene uhlobo isihlungi
Umanyolo kanye lemifanekiso uhlelo Umanyolo kanye lemifanekiso uhlelo kungamaphethelo ukuvuza isimiso sokunisela ngenkasa, umanyolo uhlelo esingayenza engasiza ekusindiseni zabasebenzi Izindleko ngoba bangasebenza ndawonye lapho wokunisela. Hlunga uhlelo kungasiza ukwenza amanzi ecacile futhi ungapheli ujamu lapho wokunisela. Tianjin Chunyuan Longrun Micro-ngenkasa CO Technical., LTD iqala umsebenzi wayo ngo-1998, futhi osungulwe inkampani ngo-2000, lapho le nkampani lokuqala wahlanganyela emsebenzini wokukhiqiza ukuvuza isimiso sokunisela ngenkasa lokulondoloza amanzi kwezolimo. Afte ...
Min.Order Ubuningi: 10000m
Supply Ikhono: 24,000,000m
Umanyolo kanye lemifanekiso uhlelo
Umanyolo kanye lemifanekiso uhlelo kungamaphethelo ukuvuza isimiso sokunisela ngenkasa, umanyolo uhlelo esingayenza engasiza ekusindiseni zabasebenzi Izindleko ngoba bangasebenza ndawonye lapho wokunisela. Hlunga uhlelo kungasiza ukwenza amanzi ecacile futhi ungapheli ujamu lapho wokunisela.
Tianjin Chunyuan Longrun Micro-ngenkasa CO Technical., LTD iqala umsebenzi wayo ngo-1998, futhi osungulwe
inkampani ngo-2000, lapho le nkampani lokuqala wahlanganyela emsebenzini wokukhiqiza uhlelo drip irrigation eyenzeka ngoba
ukulondoloza amanzi kwezolimo. Ngemva ukuthuthukiswa iminyaka about20, sinalo uhlelo ezintathu manje, drip irrigation eyenzeka ohlelweni, fafaza kusetshenziswa isimiso sokunisela ngenkasa kanye engadini ngenkasa system.The imikhiqizo main kuhlanganise ukuvuza ipayipi, PE ipayipi, PE hose, lemifanekiso uhlelo, umanyolo ithangi, ipayipi nokufakwa. Bonke kufanele kudlule isitifikedi ISO 9001.
Ngaphambi ukuthenga umkhiqizo kufanele wazi imibuzo elandelayo, sizokwenza ukuklama uhlelo drip irrigation eyenzeka ngokuvumelana imininingwane yakho.
1. ubude nobubanzi bezwe?
2. Yini isitshalo ingabe zikhule?
3. Ibanga lomugqa?
4. Umthombo wamanzi, kusukela kahle noma emfuleni noma abanye?
1.Why ukusebenzisa uhlelo drip irrigation eyenzeka?
Impendulo: Ukuconsa wokunisela uhlelo uhlelo okungase kukwenze kulondolozwa amanzi / zabasebenzi / umquba.
2.What uhlobo imikhiqizo kufanele i olukhethayo ezweni lami?
Impendulo: Kuvumelana kangakanani ezweni lakini nokuthi ufunani ukuhlela, uma ungazi kahle kangaka,
nje ungibuze kungekho manqikanqika, i uzokunika isiphakamiso ngokuvumelana imininingwane yakho.
3.Does lesi simiso abiza kakhulu?
Impendulo: Kuyinto kuxhomeke design, siyozama ukwenza konke okusemandleni ethu ukuze ukukunika umklamo abiza kancane kodwa ephumelelayo.
4. Noma yikuphi isitifiketi?
Impendulo: ejwayelekile: GB / T 17187-2009. ISO9001
5.How mayelana emva-yokuthengisa yesevisi yakho?
20years nakho ukuqeda worriers yakho mayelana zombili ikhwalithi ukufakwa.
Previous: isihlungi centrifugal
Olandelayo: idiski isihlungi
Agricultural drip irrigation eyenzeka Hlunga
Cyclone Water Hlunga
drip irrigation eyenzeka Hlunga
Hlunga Ukuze Chimney Factory
Izihlungi Ukuze Water Systems
Irrigation Micro Hlunga
Irrigation Water Hlunga System
Sand Hlunga Ukuze drip irrigation eyenzeka
Self Yokuhlanza Hlunga
Water Hlunga Onengqondo
Amanzi Hlunga Ukulinganisa Male Elbow
Amanzi Hlunga Outdoor
isihlungi centrifugal futhi anezikhala
metal 100L Umanyolo ethangini
Umanyolo ithangi 2
63mm anezikhala isihlungi